Dutchtown အတိတ်မှပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
အပေါ် Posted ဒီဇင်ဘာလတွင် 14th, 2020
အစောပိုင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ခရစ်စမတ်ဖြူဖြူအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Dutchtown အတိတ်မှနှင်းဖုံးဓါတ်ပုံများသည်အားလပ်ရက်စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိစေသည်။ ဤအဟောင်းဓာတ်ပုံများယခင်က Meramec လမ်းနှင့်ဗာဂျီးနီးယားရိပ်သာလမ်းအနီး Downtown Dutchtown တွင်တည်ရှိပြီးနှစ်ခုထင်ရှားတဲ့ estates ၏ဖြစ်ကြသည်။
အပေါ်ဆုံးတွင်ယခင်က Meramec လမ်းနှင့်ဗာဂျီးနီးယားရိပ်သာလမ်းထောင့်အနီးရှိ Barnard Mansion ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ချိန်က Meramec ၏ 3400 ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ရပ်နေသောဂျွန် Withnell Dunn အိမ်။
သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံများကို Mark Loehrer ကအရောင်ခြယ်ထားသည်။ မာ့ခ်သည်ဒေသခံသမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သည် Arch စီးတီးသမိုင်း စိန့်လူးဝစ္စတစ်ဝိုက်ရှိရပ်ကွက်များမှထောင်ပေါင်းများစွာသောအရောင်များကိုပုံဖော်ထားသော Instagram အကောင့်။ တစ်ခုရှိပါတယ် Arch စီးတီးသမိုင်းအွန်လိုင်းဆိုင် ဘယ်မှာသင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာမှာများစွာသောဓာတ်ပုံများ၏ပုံနှိပ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မာ့ခ်ရဲ့စုဆောင်းမှု ပါဝင်သည် များစွာ of ဒိန်းမတ် ဓာတ်ပုံများ တစ်နေ့နေ့မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင် post ကိုခံထိုက်သောသူ။ ယခုအချိန်အထိဤသာယာလှပသောအိမ်များပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဆောင်းရာသီအံ့ဖွယ်ရာကိုနှစ်သက်နေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအိမ်များတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး Dutchtown ၏အစောဆုံးနိုင်ငံသားနှစ် ဦး ဖြစ်သောသြဇာရှိသူများကိုအနီးကပ်လေ့လာကြည့်ရှုမည်။
ယောဟနျသ Withnell Dunn
John Withnell Dunn အိမ်ကို ၁၈၇၃ တွင် ၃၄၁၈ Meramec လမ်း၌တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒွန်သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟောင်းနှင့်မစ်ဆူရီပြည်နယ်ပါလီမန်အဆောက်အအုံနှစ်ခုလုံးဆောက်လုပ်ခဲ့သောကန်ထရိုက်တာနှင့်ကျောက်ဆစ်သမား John Dunn ၏တူဖြစ်သည်။ Padua ၏ပထမဆုံးစုရုံးနေရာဖြစ်သော St. Anthony အဖြစ်အသုံးပြုသော Dutchtown မြို့ရှိအဆောက်အအုံငယ်ကိုလည်း ဦး လေးကလှူဒါန်းခဲ့သည်။
John Withnell Dunn သည်မစ်ဆူရီအိမ်အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သုံး ဦး ဖြစ်ပြီးအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းအတွက်ကံကြမ္မာငယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် Aquin Catholic Church ၏စိန့်သောမတ်စ်တွင်တက်ကြွစွာအသင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစီရင်စုနယ်လည်ပတ်မှုမရှိတော့ပါ, ဒါပေမယ့်ဘုရားကျောင်းနှင့်ကျောင်းအိုင်အိုဝါနှင့် Osage မှာ Laclede ပန်းခြံ၏မြောက်ဘက်၌ရပ်နေဆဲ။
၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ဓာတ်ပုံဆရာများပြားလာစဉ် Dunn သည်အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာနှင့်စိန့်လူးဝစ္စကင်မရာကလပ်အသင်းဝင်လည်းဖြစ်သည်။ သူ၏သား JW Dunn, Jr. အကြီးအကဲကွယ်လွန်ပြီးနောက်သူ၏ဖခင်၏ဓာတ်ပုံစုဆောင်းမှုကိုမျှဝေခံစားခဲ့ပုံရသည်။
John Withnell Dunn ၏ပုံများ စိန့်လူးဝစ်စတားနှင့် Times သတင်းစာ.
Dunn သည်အသက် ၃၆ နှစ်ရှိပြီး ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူသည် Calvary သုသာန်တွင် Aquin ၏စိန့်သောမတ်စ်၏ဈာပနအခမ်းအနားတွင်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်။ စူပါမားကက်တစ်ခုလမ်းဖွင့်ရန်အိမ်ကို ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ဖြိုဖျက်ခဲ့သည်။ အစားထိုးအဆောက်အ ဦး ယခုနေအိမ်ဖြစ်ပါတယ် Resalat လူထုစင်တာ.
ဝီလျံ DW Barnard
ဒေါက်တာဝီလျံဒ။ ဝ။ ဒ။ ဝ။ ဒ။ ဘားသည်ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်မီက Dutchtown တွင်သူ၏အိမ်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်လက်ကားဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ၃၃၁၆ Meramec လမ်းရှိအိမ်ကြီးသည်ကျယ်ပြန့်သောမြေကွက်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အိမ်ကိုထောင့်တနေရာ၌ ၄၂၂၇ ဗာဂျီးနီးယားရိပ်သာလမ်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ လက်ရှိအထပ်နိမ့်သောတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံအတွက်လမ်းဖွင့်ရန်အိမ်ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်ဖြိုဖျက်ခဲ့သည်။
Barnard သည် Dent မိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးတော်စပ်ခဲ့သည်။ Julia Dent နှင့် General Ulysses S. Grant ၏ဇနီးဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က Barnards သည်သူတို့၏တောင်ဘက်အိမ်တွင် Grants ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ Grant သည်စစ်တပ်တွင်လက်ထောက်ဖြစ်ခဲ့စဉ် Barnard ကလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သူ့ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Barnard သည်စီးပွားရေးပြtroublနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင်သမ္မတ Grant ကမျက်နှာသာပြန်ပေးခဲ့သည်။
Barnard သည်အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ်ရှိ 1902 ရှိ City Hospital တွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
သငျသညျ Dutchtown နှင့်ကျော်လွန်ပြီးကနေနောက်ထပ်သမိုင်းကိုရှာဖွေလျှင်, ကူးကို ဦး Arch စီးတီးသမိုင်း Instagram ကိုစာမျက်နှာ။ ထိုအခါအချို့ထဲကထွက်စစ်ဆေးပါ ရောင်းရန်ထုတ်- သူတို့သည်အားလပ်ရက်လက်ဆောင်များပြုလုပ်ပေးသည်။
အောက်မှာ Filed Dutchtown သမိုင်း. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဗိသုကာအတတ်ပညာ, Dutchtown သမိုင်းနှင့် ဓါတ်ပုံပညာ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် 14th, 2020 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown သမိုင်း Dutchtown အတိတ်မှပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ